Iindaba -U-Huangyan Yjie uthumele i-352,700 yuan kubafundi abahlwempuzekileyo
Kutshanje, i-Huangyan YJIE Plastics Co., Ltd Abasebenzi baququzelele ukwenza imisebenzi yokuncedisa abafundi ekwindla ye-2020. Phantse amavolontiya angama-50 avela kwiNkampani aye esikolweni athumela iigranti kunye nezinto zesikolo kubafundi abangama-242 abahlwempuzekileyo kwesi sithili. Izibonelelo zizonke zaziyi-352,700 yuan.
“Ezi zibonelelo zivela kubantu abanenkathalo ngokwasentlalweni kunye neenkampani ezikhathalayo ezixhasa abafundi ngababini ngazinye. Inkampani ibandakanya izibonelelo kwi'Weifeng Student Aid Fund 'yokuphumeza kunye nolawulo, kwaye iphumeza iimali ezizodwa ngeenjongo ezizodwa. Nika uncedo kubantwana abanobunzima bokuya esikolweni, ”
] Kwimeko apho, aBasebenzi abawenzi nje ngononophelo umsebenzi phambi kokuba kukhutshwe izibonelelo, kodwa bakwakhuthaza abo bafumanayo ukuba babulele kwaye baphumelele kwizifundo zabo, kwaye babe ngabantu abanethemba.
Ukupakisha Bottle yewayini, Iplastiki yeBarware, Ukutya IBakala iibhotile zePet, Cwangcisa iBarware, I-Barware yokukhuthaza, I-Barware engenakuqhekeka,